भ्वाइस अफ नेपालको सेटमा किन रोए राजु लामा ? – AB Sansar
भ्वाइस अफ नेपालको सेटमा किन रोए राजु लामा ?
April 3, 2021 Admin01LeaveaComment on भ्वाइस अफ नेपालको सेटमा किन रोए राजु लामा ?
यतिबेला धुमधामसाथ ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’को माहौल तातिएको छ । देशको कुना–कन्दरा मात्र होइन, सीमापारमा समेत रहेका नेपाली गायन प्रतिभा खोज्ने लोकप्रिय रियलिटी शो हो यो । भ्वाइस अफ नेपालको सिजन ३ सुरु भइसकेको छ ।
गायनमा भविष्य खोज्नेहरु अहिले यही प्लेटफर्ममार्फत आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दैछन् । हिमालयन टेलिभिजन एचडीबाट प्रसारण भइरहेको यो रियलिटी शोको अहिले ब्लाइन्ड अडिसन चलिरहेको छ । ब्लाइन्ड अडिसनको पाँचौ दिनमा कोच राजु लामा रोए । उनी किन रोए ? धेरैले सोधीखोजी गरेका छन् ।
एक जनाले यस्तो प्रतिक्रिया लेखेका छन्, ‘हँसिलो राजु लामा रुँदा यो मन रुने नै भयो ।’ आखिर किन रोए त राजु लामा ?
राजु लामाले आफुलाई सम्हाल्न सकेका छैनन् । उनी स्वभाविक बन्ने प्रयास गर्छन्, तर गहभरी छचल्किएको आँशु लुकाउन सकेका छैनन् । उनी रोएको देखेर बाँकी कोचहरु पनि भावुक बन्छन् ।खासमा राजुले नै अर्का कोच बरिष्ठ गायक दीप श्रेष्ठलाई गीत सुनाउन अनुरोध गर्छन् । दीपले आफ्ना पुराना गीतमा भागमा भाका हाल्छन्, ‘झीरमा उनिनु एउटा कुरा ।’ गीत सुन्दा सुन्दै राजु लामाले आफुलाई थाम्न सक्दैनन् । दीप श्रेष्ठतर्फ फर्किएर भन्छन्, ‘दाई, मलाई रुवाउनुभयो ।’
भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ दाहिने शंखलाई देख्नेबित्तिकै दर्शन गरि सेयर गर्नाले मिल्नेछ तपाईको जीवनमा सुख र शान्ति ! ,
महिलाहरुको यस्तो इच्छा जुन हरेक पुरुषलाइ थाहा नै हुँदैन !
April 3, 2021 Admin01
ग र्भमा छोरा छन् की छोरी भनेर हेर्न श्रीमतिको पेट ह सि याले का टि दिए”
September 21, 2020 September 21, 2020 Ab-संसार
यी युवकले भक्तपुरको गाई फार्ममा यसरी साथीलाई खु’कु रीले टु क्रा पारे, आफ्नै आमाले छोरोलाई प्रहरीको जिम्मा लगाईन (भिडियो सहित) April 17, 2021
बजेटको तयारी : सामूहिक छलफलमार्फत् सुझाव संकलन April 17, 2021
असिनाले तरकारी नष्ट April 17, 2021
बाघको आ”तंक फेरि; बर्दियाको ठाकुरबाबाका ६२ वर्षीय रावतको मृ’त्यु April 17, 2021
सगरमाथामा पाइला राख्नुअघि शिर राख्न चाहन्छु’दृष्टिविहीन आरोही अमिट केसी: April 17, 2021